မိုးတိမ်၏ ဘာညာသာရကာ နေကြာ ကွာစိ: မြန်မာ့ဆေးကောင်းတစ်ခွက်
သတိ ... ဤပိုစ့်အား အစာစားနေတုန်း၊ အစာစားပြီးစအချိန်တွင် မဖတ်ရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ :D
“တန်ဆေး လွန်ဘေး“တဲ့ ... ဒီစကားပုံကို ကြားဖူးကြမှာပဲနော်... အစာပဲဖြစ်ဖြစ် .. ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ် .. တန်ရုံအသုံးပြု စားသုံးရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်....
ကျွန်တော့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို တင်ပြရင်း .... သူငယ်ချင်းတွေကိုလည် ဆင်ခြင်စေလိုပါတယ်.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်တုန်းက စစ်တွေမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကပေါ့။ အဲ့ဒီတုန်းက ရေခူတွေကို တရုတ်ပြည်က ဈေးကောင်းပေးဝယ်ကြလိုို့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေ သွားပြီးစွန့်စားကြတယ်။ ကျွန်တော် သဲသောင် အ၀ယ်ဒိုင်မှာ တာဝန်ကျတဲ့အချိန်လေးမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။ သဲသောင်ပေါ်မှာ တစ်ပတ်ကို ၁ ယောက် တာဝန်ကျသွားရတယ်။ အဲ့ဒီသဲသောင်(ကျွန်းလေး)ပေါ်မှာက ရေချိုအရမ်းရှားတယ်ဗျ။ ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာဆိုတော့ ရေငန်တွေပဲ ပေါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက အလုပ်ကလည်း အရမ်းရှုပ်။ ရေချိုကလည်း လွယ်လွယ်နဲ့မရတာကြောင့် ၃ ရက်လောက်ကို ရေမချိုးဖြစ်ဘူးဗျ။ .. ဟဲ .. ဟဲ .. ညစ်ပတ်တာဟုတ်ဘူးနော်... ဟီး .. ရေမရှိတာ ...။ ရေပတ်တော့ တိုက်တာပေါ့ဗျာ။ အဲ .. အဲ့ဒီမှာ စတော့တာပဲ .. လူကရေမချိုးဖြစ်လို့ အပူတွေ အရမ်းတက်နေတယ်။ ဒါနဲ့ အ၀ယ်ဒိုင်ကနေ မြို့ထဲကိုတက်မယ့် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ကို ဆေးမှာလိုက်တယ်။ အပူကျဆေးပါ။ တစ်ကဒ်ဝယ်ခဲ့ဖို့ ကျွန်တော်မှာလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ် .. အဲ့ဒီနေ့က မြို့ထဲမသွားဖြစ်ဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ ငနဲက “အပူကျဆေးမသောက်နဲ့ .... ၀မ်းပျော့ဆေးသောက် ..ကျွန်တော့်ဆီမှာ ရှိတယ်။ ရော့ .. ”ဆိုပြီးလာပေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း များများ စဉ်းစားမနေတော့ဘူး။
“အေး .. ၀မ်းပျော့ဆေးလည်းကောင်းတာပဲ ... ဒါနဲ့ ... ကိုညီ ဒီနေ့ ညနေတော့ ငါ့ကို ရေချိုးလို့ရအောင် စီစဉ်ပေးကွာ .. ရွာထဲသွားပြီးရေသွားဝယ်ပေးဦး” ...
“ဟုတ်ကဲ့ .. အကို.. ကျွန်တော် လူလွတ်လိုက်ပါ့မယ်”...
“အေးကွာ .. ကျေးဇူးပဲ”
သူလဲသွားရော .. ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ သူပေးထားတဲ့ ၀မ်းပျော့ဆေးဘူးကိုဖွင့်ပြီး ၅ လုံးလောက် သောက်ချလိုက်တယ်.. သောက်ပြီးမှ သတိရတယ်...
“ဟ ... ညအိပ်မှ သောက်ရမှာ .. ငါ့တော့ ဒုက္ခပဲ” ...
ဒါပေမယ့် ... ၀မ်းပျော့ဆေးက ညနေပိုင်းအထိ ဘာအစွမ်းမှ မပြဘူး။ ညနေကျတော့ ရေးချိုးလိုက်ရတယ်။ ထွက်လိုက်တဲ့အပူတွေ ရှိန်း ရှိန်း .. ရှိန်း ရှိန်းနေတာပဲ။ ရေတောင် အငွေ့ဖြစ်ပြီး ပျံသွားသလား မှတ်ရတယ်။
ညအိပ်ခါနီးကျတော့ .. “အင်း .. ငါမနက်တုန်းက ၀မ်းပျော့ဆေးတွေသောက်တာ ဘာမှလည်းမဖြစ်ပါလား .. မထူးပါဘူး ... အခုသောက်လိုက်ရင် မနက်ကျ အဆင်ပြေမှာပဲ”လို့တွေးမိပြီး .. နောက်ထပ် ၀မ်းပျော့ဆေး ၅ လုံးသောက်ချလိုက်တယ်။ ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘူး .. အိပ်လိုက်တယ်.....။
ဗိုက်ထဲက အောင့်သလိုလို ခံစားရတာနဲ့ ကျွန်တော် အိပ်ရာကနေနိုးခဲ့တယ်... နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၄း၃၀ တိတိ။ “အမ်... အစောကြီးရှိသေးတယ် ... အား .. ဗိုက်ကလည်း ဘာဖြစ်တာပါလိမ်...အောင့်လိုက်တာ..” ပြီးမှ ညတုန်းက ၀မ်းပျော့ဆေးတွေ သောက်ထားမှန်းသတိရလိုက်တယ်။ ...“ဟ ...ဟ .. ပြေးမှဖြစ်တော့မယ်”ဆိုပြီး အိမ်သာကို တန်းပြေးတော့တာပေါ့။ ပထမတစ်ခါတုန်းကတော့ အဆင်ပြေတယ်။ အိပ်ရာထဲရောက်ပြီး ၁၀မိနစ်လောက်လည်းကြာရော .... “အီး .. အောက့်လာပြန်ပြီး ...ပြေးပြန်ပဟ” ..ဆိုပြီးပြေးရပြန်တယ်။ နောက် ၅ မိနစ်ခြား .. တတိယအကြိမ် .. ဒီလိုနဲ့ ...... အကြိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာ ..... ပြေးပြီးတဲ့နောက် .. ကျွန်တော်တစ်ယောက် အိပ်ရာကနေ မထနိုင်တော့တဲ့အချိန်အထိပါပဲ။
“ဟာာ.... အကို ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျာ” ...ဆိုပြီး ကျွန်တော့ကို ဆေးပေးတဲ့ ၀န်ထမ်းက လာကြည့်တယ်။
“ေ အး... ကွာ ... မ င်းပေးတဲ့ဆေးေ သာက်ြ ပီး မ ထနိုင်ေ တာ့ ဘူး ကွ.....”
“ဟာ .. အကို ဘယ်နှစ်လုံးတောင် သောက်လိုက်တာလဲ ? ”
“ ၅ လုံးတ ည်း ပါကွာ ... အဲ. ... မ င်းပေးတုန်း က ၅ လုံး..... ၁ ၀ လုံးေ ပါ့ ..”
“အမ်... ၁၀ လုံး .. အောင်မလေး ဖြစ်ရလေ ..အကိုရေ .. တစ်ခါသောက်မှ .. ၃ လုံးတည် သောက်ရတာ... ဒါတရုတ်ဆေးဟုတ်ဘူးလေ .. ယိုးဒယားဆေး ...”
“ . သိဘူးလေ ကွာ .. မ င်းပေးတဲ့ဆေးဘူး မှာဘာမှမှေ ရးမ ထား တာ”
ဟုတ်သည် ..သူပေးတဲ့ပုလင်းက ဘာတံဆိပ်မှ မပါ .. အလုံးလိုက်ဝယ်ပြီး ပုလင်းလွတ်တစ်လုံးထဲ ထည့်ထားပုံရတယ်။
“အကို .. ဒါဆိုရင် အကို ဆေးခန်းသွားမှဖြစ်မယ်... ဒီအတိုင်းဆိုမလွယ်ဘူး .. ကျွန်တော် ဘုတ်သွား စီစဉ်လိုက်မယ်” ..
“အေးကွာ .. ဟိုကောင်ေ တွကို Cordless နဲ့ လှမ်ြးေ ပာလို က်ကွာ ..ကျေး ဇူး ပဲ”
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် တစ်ယောက် .. စစ်တွေ ဆေးခန်းကို ရောက်ပြီး ပုလင်းကြီးချိတ်ရတဲ့ ဘ၀အထိ ရောက်ခဲ့တယ်။ ၂ ရက်လောက် အိပ်ယာထဲမှာ လဲနေရတဲ့ဘ၀။ အခုထိ အမှတ်ရနေတုန်းပဲ .... :D ...။
ဒီလိုနဲ့ ..... သဲသောင်ပေါ်ကို နောက်တစ်ခေါက် တာဝန်အကျ ... ကျွန်တော်တို့ ဒိုင်ထဲက အလုပ်သမား အရီးတစ်ယာက်က “ သားလေး .. အရင်တစ်ခါက တော်တော် ခံလိုက်ရတယ်ဆို ...”
ကျွန်တော် နည်းနည်းတော့ရှက်သွားတယ်... “ အဟီး .. ဟုတ်တယ်.. အရီး ... အသောက်လွန်သွားတာ”
“သြော် .. မိဘနဲ့ ခွဲနေတဲ့သူတွေက အဲ့ဒီလိုပဲ .. ဒုက္ခရောက်တတ်ကြတယ်”
“ဟုတ်တယ်လေ .. မင်းမိဘနဲ့နေရင် .. ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဖြစ်မလား ...”
ဟုတ်ပါသည်.... ရင်ထဲမှာ ကျွန်တော့် မိဘနှစ်ပါးကို သတိရပြီး လွမ်းလာသည်။
“ဟုတ်တယ်နော်..အရီး .... ကျွန်တော်တို့ မိဘနဲ့နေတုန်းက ဟိုဟာစားချင် .. ဒီဟာစားချင် ....ဆိုတိုင်း မိဘတွေက မကျွေးဘူး။ စာသင့်တဲ့ဟာကိုစားစေပြီး မစားသင့်တဲ့အရာတွေကို မကျွေးဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မစားရတော့ စိတ်ကောက်တာပေါ့ဗျာ .. အခုတော့ နားလည်လာပါပြီ ...”
“အေးကွယ်... မိဘတွေက နင်တို့တွေထက် အတွေ့အကြုံပိုများတယ်လေ ... သူတို့မေတ္တာနဲ့ အတွေ့အကြုံပေါင်းစပ်ပြီး သားသမီးတွေကို စောင့်ရှောက်တာပေါ့ .. အခုပဲကြည့် နင်လည်း .. အတွေ့အကြုံတစ်ခု ရသွားပြီ .. နင့်သားသမီးတွေ ရရင်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမကြုံအောင် ဆိုဆုံးမ မှာပဲလေ .. ဟုတ်ဘူးလား ”
“ဟုတ်ကဲ့ .. အရီး .. ”
“တန်ဆေး .. လွန်ဘေးတဲ့ ..... ဆေးဆိုတဲ့အရာကလည်း အသုံးပြုလွန်ရင် ဘေးဖြစ်တတ်တယ်။
ကဲ .. အရီးမင်းကို မြန်မာ့ ဆေးကောင်တစ်ခွက်ပေးလိုက်မယ်။ အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုရင် .. မကျည်းသီးပဲ။ မကျည်းသီးကို မကျည်းရည်လုပ်သောက်လိုက်။ တစ်ခွက်လောက်ပဲသောက်။ မကျည်းသီး အနေတော်လောက်ကို ဆားနည်းနည် .. ပြီးတော့ ထန်းလျက်နည်းနည်းထည့်ပြီးဖျော်လိုက်။ အဲ့ဒါကိုသောက် အရမ်း ကောင်းတယ်... စမ်းသောက်ကြည့်ပေါ့ .. သောက်ကောင်းကောင်းနဲ့အများကြီးတော့ မသောက်နဲ့နော်.. ထပ်လျှောနေဦးမယ်...”
“ဟီး ... ကျေးဇူပဲအရီး .. ကျွန်တော် သောက်ကြည့်မယ်”
“ကဲပါလေ .. ငါပဲလုပ်ပြီးလာပို့မယ် .... ပစ္စည်းအဆင်သင့်ရှိတယ် .. ညနေကျ လာပို့လိုက်မယ်”
“ဟာ .. ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်..”
“ရပါတယ်ကွယ်..... ကဲကဲ .. သွားပြီနော်..”
“ဟုတ်ကဲ့ အရီး .. ဖြေးဖြေးနော်.....”
ညနေကျတော့ ... ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်က ခွက်တစ်ခွက်နဲ့ မန်ကျည်းရည် အပြည့်လာပို့တယ်။ သောက်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ (နောက်ပိုင်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လုပ်သောက်ကြည့်တာ အရသာမတူဘူးဗျ .. ဘာလိုနေလဲမသိဘူး .. ဟီး)။ မနက်ကျတော့ အနေတော်ပဲ .... အားလုံး OK တယ်.....
ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ကျွန်တော့်လို အဖြစ်မျိုး မကြုံရလေအောင် ... မန်ကျည်းသီးကိုဆောင် ...... ......
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 10:25 AM